အမုန်းတွေ ကျေပေးပါ။ - For her Myanmar
အဖေသိပ်ကြိုက်သော စာအုပ်တွေကို ဘယ်မှာများ သိမ်းထားကြပါလိမ့်။
ညနေခင်းသည် လိမ္မော်နီရောင် သန်းနေသည်။ အိမ်ယာဝင်းထဲတွင် ပျော်မြူးဆော့ကစားနေသော ကလေးတစ်အုပ်သည် သူ့ကို သတိထားမိဟန်ပင် မပြ။ မရောက်တာ နှစ်ပေါက်နေပြီဖြစ်သော ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဝင်းလေးထဲသို့ သူ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်မိသည်။ သူငယ်စဉ်က အဖေနှင့်စိတ်ဆိုးတိုင်း ထွက်ထိုင်နေကျ ပိတောက်ပင်အောက်က သစ်သားခုံဝိုင်းလေး ရှိမနေတော့။ ဝင်း၏ ဝင်ဝင်ချင်း ဘယ်ဘက်လမ်းချိုးကလေးသို့ ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည်။ တန်းစီ၍ ဆင့်ထပ်ကာ ဆောက်လုပ်ထားသော ဝန်ထမ်းတန်းလျားလေးမှ တတိယမြောက် လှေကားကျဉ်းလေးကို သူစတင်တက်လှမ်းလိုက်သည်။
မီးခိုးရောင် သစ်သားတံခါးရှေ့တွင် သူအချိန်အတော်ကြာရပ်နေမိသည်။ ပြီးမှ လက်ထဲက ဖြည့်စွက်စာများ ထည့်ထားသောခြင်းကလေးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း တံခါးကို ခေါက်လိုက်သည်။ “ကျွီ” ခနဲပွင့်လာသော တံခါးနောက်တွင် မြင်လိုက်ရသော မျက်ဝန်းတစ်စုံက ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားသည်။
ကျောခိုင်းဝင်သွားသူ ဒေါ်ခင်ထား၏ လေသံက ကိုမင်းလတ်အပေါ် မနှစ်မြို့မှု အပြည့်ပင်။
“မင်းအဖေဆီ လာတာမလား အခန်းထဲမှာ ဝင်သွားလိုက်ပါကွယ်”
သူခေါင်းအသာညိတ်၍သာ အဖေအိပ်နေကျ အတွင်းခန်းလေးသို့ လှမ်းဝင်ခဲ့သည်။ အခန်းဝသို့ခြေချလိုက်သည်နှင့် သူ့ နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာသည်က အဖေ့ရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေး။ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ ကျော်က အဖေ့ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ဆော့ကစားတိုင်း ရခဲ့သည့် ထိုရနံ့လေးကို သူမမေ့သေးပေ။ အခန်းထဲ ဖွဖွလျှောက်ဝင်ရင်း အခန်းပတ်လည်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်မိသည်။ နံရံ ကပ် ဘီရိုနှစ်ခုစလုံး စာအုပ်တစ်အုပ်မှ မရှိဘဲ ပြောင်ရှင်းလျက်ရှိသည်။ အဖေသိပ်ကြိုက်သော စာအုပ်တွေကို ဘယ်မှာများ သိမ်းထားကြပါလိမ့်။
သူအဖေ့နားကို တိုးကပ်သွားကာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ခုတင်ပေါ်တွင် လှဲလျောင်းနေသော အဖေသည် အသားအရေ ပြည့်တင်းခြင်းမရှိတော့ဘဲ လက်ကလေး၊ ခြေကလေးတွေ အရိုးပေါ်အရေထပ်၍ ပိန်လှီကာနေသည်။ နဂိုက ဖြူဖွေးလှသော အဖေ့အသားအရောင်က အခုဆို ညိုညစ်လို့။ မျက်တွင်းတွေလည်း ချိုင့်ခွက်ကာ နှုတ်ခမ်းက အနည်းငယ် ရွဲ့နေသည်။ နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေသော အဖေ့ရင်ဘတ် မောက်မောက်ကလေးက အသက်ကို ကြိုးစားရှူနေရကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
စေ့ကပ်စွာ ပိတ်ထားသော မျက်လုံးများကို အားယူဖွင့်လိုက်တဲ့ အဖေ့ကိုကြည့်ရင်း သူ့ရင်ထဲမှာ အလိုလိုဝမ်းနည်းလာသည်။ အဖေက သူ့ကိုမြင်တော့ မျက်လုံးထဲမှာ အရည်ကြည်လေးများ လဲ့လာသည်အထိပြုံးပြသည်။
Related Article >>> အဖေ့အတွက် (အပါးအတွက်) စာတစ်စောင်
အဖေက သူ့ရဲ့ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့လက်ကလေးကို ကမ်းပေးတော့ သူတယုတယ ဆုပ်ကိုင်မိသည်။ ငယ်စဉ်က သူ့ရဲ့လက်ကို အဖေဆုပ်ကိုင်လိုက်တိုင်း အဖေ့ကိုယ်တွင်းမှအားတွေ သူ့ဆီ စီးဝင်လာသလို ခံစားခဲ့ရသည်။ အခုရော သူ့ဆီက အားအင်တွေ အဖေ့ဆီစီးမြောသွားမလား သူမတွေးတတ်။
အဖေက ခေါင်းလေးညိတ်ပြရင်း သူ့နောက်ဘက်ကို အကဲခတ်ကြည့်သည်။ သူက သက်ပြင်းကို ခပ်သာသာလေးချကာ
“ဆွေနဲ့ သမီးတွေ မပါဘူး အဖေ… ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလာတာ”
အဖေ့မျက်လုံးလေးများ ကြည်လင်နေရာမှ ရုတ်ချည်းအုံ့မှိုင်းသွားသည်။ အရင်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို အဖေလည်း မေ့လောက်မှာမဟုတ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က သီတင်းကျွတ်တွင် အဖေ့ကိုကန်တော့ရန် ဆွေနှင့်သမီးကြီးကိုခေါ်ပြီး သူ လာဖူးသည်။ “အလကား အမွေလိုချင်လို့လာကန်တော့တာ” ဆိုသော ဒေါ်ခင်ထား၏ စကားကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ချက်ချင်း ထပြန်တော့ အဖေ့မျက်နှာမကောင်းပါ။
“သမီးကြီးက ၈ တန်းရောက်နေပြီ အငယ်လေးက ၄ တန်းလေ…. ညနေပိုင်း နှစ်ယောက်လုံးကျူရှင်ရှိလို့ ခေါ်မလာတာ နောက်တစ်ခေါက်ပါအောင် ခေါ်ခဲ့မယ် အဖေ”
အဖေ့အသံက မပီမသမို့ သူသေချာ နားစိုက်ထောင်ရသည်။
“နှစ်ယောက်လုံး စာလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပဗဟုသုတစာတွေလည်း ဖတ်တယ်။ ဒါနဲ့ အဖေ့ဘီရိုထဲက စာအုပ်တွေရော”
“ပိုးစားခြကိုက်နဲ့မို့ လှူလိုက်ပြီ ကိုလတ်ရေ… မင်းအဖေလည်း ဒီစာအုပ်တွေကို ဘာတွေတပ်မက် စွဲလမ်းနေလဲမသိ… တစ်နေ့ တစ်နေ့ သားသမီးကိစ္စ မြေးကိစ္စ မင်းအဖေကိစ္စတွေနဲ့ ပိုးစားခြကိုက်စာအုပ်တွေကို ဂရုမစိုက်အားလို့ လှူလိုက်ပြီ”
သူ့အတွက် ဖျော်လာသော ကော်ဖီခွက်ကို စားပွဲပေါ်တင်ရင်း ဒေါ်ခင်ထားက ခနဲ့ပြောလေးပြောကာ ထွက်သွားသည်။ ဒေါ်ခင်ထား၏ ခနဲ့သံက သူ့အတွက်တော့ သိပ်မဆန်းလှပါ။ သူ ၁၀ နှစ်သားမှာ အမေဆုံးသွားပြီး အဖေက ဒေါ်ခင်ထားနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမို့ ဒေါ်ခင်ထားက သူ့အမေဖြစ်လာခဲ့သည်။ အစကတော့ ချစ်ခင်နှစ်လိုသည့်ဟန် ပြခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ကိုနှိပ်စက်လာသည်။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ရိုက်နှက်လာသည်။ ဒါတွေကို အဖေက သိလျက်နဲ့တောင် ဘာမှမပြောဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့လို့ သူအဖေ့အပေါ် နာကျည်းခဲ့သည်။ “အဖေ ဒီမိန်းမနဲ့ မကွာရင် ကျွန်တော် အိမ်ပေါ်က ဆင်းမယ်” လို့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း နှုတ်လန်ထိုးတုန်းကလည်း အဖေက သူ့ကို ခပ်အေးအေးသာ ကြည့်နေခဲ့သည်။
သားတစ်ယောက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သောစိတ်နှင့် ဒေါ်ခင်ထားနှင့် ရသော သမီး ခင်မေကို အရိပ်အမိုးအောက်က လွတ်ထွက်မသွားစေချင်သောစိတ် လွန်ဆွဲနေရသော ဖခင်တစ်ယောက်၏ မေတ္တာကို သူကိုယ်တိုင်ဖခင်ဖြစ်ပြီး တော်တော်ကြာမှ သိရှိခံစားခဲ့ရသည်။
“အဖေ စာအုပ်တွေဖတ်ချင်ရင် ကျွန်တော်ဝယ်လာပေးမယ်လေ…ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ အသစ်ထွက်တယ် ကြိုက်မယ်မလား”
အဖေက ပြုံးကာ ခေါင်းညိတ်စဉ် ဒေါ်ခင်ထား၏ အသံက စူးခနဲ ဝင်လာသည်။
“အမလေး ကိုလတ်ရယ် ငွေကုန်ခံမနေပါနဲ့ မင်းအဖေက ထိုင်တောင်မထိုင်နိုင်ဘဲနဲ့ စာဖတ်ဖို့ဆိုဝေးသေး”
အဖေက ဒေါ်ခင်ထားအသံကို မကြားချင်ဟန်ဖြင့် မျက်လုံးအသာမှိတ်ကာ ငြိမ်နေတော့သည်။ သူအဖေ့လက်ကို တင်းတင်းလေး ဖျစ်ညှစ်လိုက်ပြီး အဖေ့ကိုနှုတ်ဆက်ကာ ပြန်ခဲ့တော့သည်။
“ဖေဖေ ဖေဖေ ဒီမှာ ဘိုးဘိုးကြီးနာမည်ပါလာတယ်”
အလုပ်မသွားခင် ဘုရားကန်တော့နေသော သူ့ဆီသို့ သမီးငယ်လေးက ကြေးမုံသတင်းစာနှင့်အတူ အပြေးရောက်လာသည်။ နောက်ဆုံးနားက နာရေးသတင်းမှာ သူအဖေ့နာမည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ဒေါ်ခင်ထား၏ခင်ပွန်း၊ မခင်မေ၏ ဖခင်” တဲ့။ အဖေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာတောင် သူက သားတစ်ယောက်နေရာတွင်ရှိမနေခဲ့ပါလေ။
အိမ်တံခါးဝမှ လှမ်းခေါ်သံကြောင့် သူထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ခင်မေဖြစ်နေသည်။ သူ့ဆီအညိုရောင် စာအိတ်ရှည်ရှည်လေး ထိုးပေးရင်း “ဖေဖေက ကိုလတ်ကို သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်… ကိုလတ် ဖေဖေ့ကို မနာကျည်းပါနဲ့တော့နော်” ဟုပြောကာ လှည့်ထွက်သွားတော့သည်။
အဖေ သားကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်။ သားက အဖေ့ရဲ့ ထာဝရ သားတစ်ယောက်ပါ။ အဖေ့အပေါ် သားရဲ့ အမုန်းတွေ ကျေပေးပါ။
အဖေ့ စာကလေးက သိပ်တိုပါသည်။ ထိုစာလေးကို ဖတ်ရင်း သူမျက်ရည်များ ဒလဟောကျလာတော့သည်။ စာရွက်နောက်တွင် ခေါက်လျက်ပါလာသော အဖေပိုင်သည့် အိမ်နှင့်ခြံကို သူ့ထံလွှဲသည့်စာချုပ်လေးက သူ့ကိုလှောင်ပြောင်နေသလို။ စားပွဲပေါ်တွင် အထပ်လိုက်ရှိနေသာ ဘာသာပြန်စာအုပ်အချို့က သူ့ကို လှောင်ပြောင်နေသလို။
ငယ်စဉ်ကတည်းက သူအဖေ့အပေါ်အထင်လွဲခဲ့သည်။ အရွဲ့တိုက်ခဲ့သည်။ ရိုင်းစိုင်းစွာ နှုတ်လန်ထိုးခဲ့ဖူးသည်။ အသက်ကြီးလာတော့ မခံချင်စိတ်ကလေးကို အကြောင်းပြုကာ အဖေနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာနေခဲ့ဖူးသည်။ အထင်လွဲကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိမ်ပြန်မလာသော သားမိုက်အပေါ် မပျက်ပြယ်သော အဖေ့မေတ္တာကို သူခံစားမိလိုက် သည်။ သူမျက်နှာကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ကာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးရင်းက “အဖေ ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာ ကိုယ့်မေတ္တာကို အထင်လွဲစော်ကားခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ” ဟုသာ…
ဆွေး (နှလုံးသား၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှ)
အဖသေိပျကွိုကျသော စာအုပျတှကေို ဘယျမှာမြား သိမျးထားကွပါလိမျ့။
ညနခေငျးသညျ လိမ်မျောနီရောငျ သနျးနသေညျ။ အိမျယာဝငျးထဲတှငျ ပြျောမွူးဆော့ကစားနသေော ကလေးတဈအုပျသညျ သူ့ကို သတိထားမိဟနျပငျ မပွ။ မရောကျတာ နှဈပေါကျနပွေီဖွဈသော ဝနျထမျးအိမျယာဝငျးလေးထဲသို့ သူ ဝဝေဲ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ သူငယျစဉျက အဖနှေငျ့စိတျဆိုးတိုငျး ထှကျထိုငျနကြေ ပိတောကျပငျအောကျက သဈသားခုံဝိုငျးလေး ရှိမနတေော့။ ဝငျး၏ ဝငျဝငျခငျြး ဘယျဘကျလမျးခြိုးကလေးသို့ ခြိုးကှဝေ့ငျလိုကျသညျ။ တနျးစီ၍ ဆငျ့ထပျကာ ဆောကျလုပျထားသော ဝနျထမျးတနျးလြားလေးမှ တတိယမွောကျ လှကေားကဉျြးလေးကို သူစတငျတကျလှမျးလိုကျသညျ။
မီးခိုးရောငျ သဈသားတံခါးရှတှေ့ငျ သူအခြိနျအတျောကွာရပျနမေိသညျ။ ပွီးမှ လကျထဲက ဖွညျ့စှကျစာမြား ထညျ့ထားသောခွငျးကလေးကို ခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျရငျး တံခါးကို ခေါကျလိုကျသညျ။ “ကြှီ” ခနဲပှငျ့လာသော တံခါးနောကျတှငျ မွငျလိုကျရသော မကျြဝနျးတဈစုံက ရုတျခညျြးပွောငျးလဲသှားသညျ။
ကြောခိုငျးဝငျသှားသူ ဒျေါခငျထား၏ လသေံက ကိုမငျးလတျအပျေါ မနှဈမွို့မှု အပွညျ့ပငျ။
“မငျးအဖဆေီ လာတာမလား အခနျးထဲမှာ ဝငျသှားလိုကျပါကှယျ”
သူခေါငျးအသာညိတျ၍သာ အဖအေိပျနကြေ အတှငျးခနျးလေးသို့ လှမျးဝငျခဲ့သညျ။ အခနျးဝသို့ခွခေလြိုကျသညျနှငျ့ သူ့ နှာခေါငျးထဲ တိုးဝငျလာသညျက အဖရေဲ့ ကိုယျသငျးရနံ့လေး။ လှနျခဲ့သော နှဈ ၃၀ ကြျောက အဖရေ့ငျခှငျထဲ တိုးဝငျဆော့ကစားတိုငျး ရခဲ့သညျ့ ထိုရနံ့လေးကို သူမမသေ့ေးပေ။ အခနျးထဲ ဖှဖှလြှောကျဝငျရငျး အခနျးပတျလညျကို လှညျ့ပတျကွညျ့မိသညျ။ နံရံ ကပျ ဘီရိုနှဈခုစလုံး စာအုပျတဈအုပျမှ မရှိဘဲ ပွောငျရှငျးလကျြရှိသညျ။ အဖသေိပျကွိုကျသော စာအုပျတှကေို ဘယျမှာမြား သိမျးထားကွပါလိမျ့။
သူအဖနေ့ားကို တိုးကပျသှားကာ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ခုတငျပျေါတှငျ လှဲလြောငျးနသေော အဖသေညျ အသားအရေ ပွညျ့တငျးခွငျးမရှိတော့ဘဲ လကျကလေး၊ ခွကေလေးတှေ အရိုးပျေါအရထေပျ၍ ပိနျလှီကာနသေညျ။ နဂိုက ဖွူဖှေးလှသော အဖအေ့သားအရောငျက အခုဆို ညိုညဈလို့။ မကျြတှငျးတှလေညျး ခြိုငျ့ခှကျကာ နှုတျခမျးက အနညျးငယျ ရှဲ့နသေညျ။ နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြဖွဈနသေော အဖရေ့ငျဘတျ မောကျမောကျကလေးက အသကျကို ကွိုးစားရှူနရေကွောငျး ဖျောပွနသေညျ။
စကေ့ပျစှာ ပိတျထားသော မကျြလုံးမြားကို အားယူဖှငျ့လိုကျတဲ့ အဖကေို့ကွညျ့ရငျး သူ့ရငျထဲမှာ အလိုလိုဝမျးနညျးလာသညျ။ အဖကေ သူ့ကိုမွငျတော့ မကျြလုံးထဲမှာ အရညျကွညျလေးမြား လဲ့လာသညျအထိပွုံးပွသညျ။
Related Article >>> အဖအေ့တှကျ (အပါးအတှကျ) စာတဈစောငျ
အဖကေ သူ့ရဲ့ အရိုးပွိုငျးပွိုငျးထနတေဲ့လကျကလေးကို ကမျးပေးတော့ သူတယုတယ ဆုပျကိုငျမိသညျ။ ငယျစဉျက သူ့ရဲ့လကျကို အဖဆေုပျကိုငျလိုကျတိုငျး အဖကေို့ယျတှငျးမှအားတှေ သူ့ဆီ စီးဝငျလာသလို ခံစားခဲ့ရသညျ။ အခုရော သူ့ဆီက အားအငျတှေ အဖဆေီ့စီးမွောသှားမလား သူမတှေးတတျ။
အဖကေ ခေါငျးလေးညိတျပွရငျး သူ့နောကျဘကျကို အကဲခတျကွညျ့သညျ။ သူက သကျပွငျးကို ခပျသာသာလေးခကြာ
“ဆှနေဲ့ သမီးတှေ မပါဘူး အဖေ… ကြှနျတျောတဈယောကျတညျးလာတာ”
အဖမေ့ကျြလုံးလေးမြား ကွညျလငျနရောမှ ရုတျခညျြးအုံ့မှိုငျးသှားသညျ။ အရငျတုနျးက အဖွဈအပကျြကို အဖလေညျး မလေ့ောကျမှာမဟုတျ။ လှနျခဲ့သော ၁၀ နှဈက သီတငျးကြှတျတှငျ အဖကေို့ကနျတော့ရနျ ဆှနှေငျ့သမီးကွီးကိုချေါပွီး သူ လာဖူးသညျ။ “အလကား အမှလေိုခငျြလို့လာကနျတော့တာ” ဆိုသော ဒျေါခငျထား၏ စကားကို မခံမရပျနိုငျဖွဈကာ ခကျြခငျြး ထပွနျတော့ အဖမေ့ကျြနှာမကောငျးပါ။
“သမီးကွီးက ၈ တနျးရောကျနပွေီ အငယျလေးက ၄ တနျးလေ…. ညနပေိုငျး နှဈယောကျလုံးကြူရှငျရှိလို့ ချေါမလာတာ နောကျတဈခေါကျပါအောငျ ချေါခဲ့မယျ အဖေ”
အဖအေ့သံက မပီမသမို့ သူသခြော နားစိုကျထောငျရသညျ။
“နှဈယောကျလုံး စာလိုကျနိုငျပါတယျ။ ပွငျပဗဟုသုတစာတှလေညျး ဖတျတယျ။ ဒါနဲ့ အဖဘေီ့ရိုထဲက စာအုပျတှရေော”
“ပိုးစားခွကိုကျနဲ့မို့ လှူလိုကျပွီ ကိုလတျရေ… မငျးအဖလေညျး ဒီစာအုပျတှကေို ဘာတှတေပျမကျ စှဲလမျးနလေဲမသိ… တဈနေ့ တဈနေ့ သားသမီးကိစ်စ မွေးကိစ်စ မငျးအဖကေိစ်စတှနေဲ့ ပိုးစားခွကိုကျစာအုပျတှကေို ဂရုမစိုကျအားလို့ လှူလိုကျပွီ”
သူ့အတှကျ ဖြျောလာသော ကျောဖီခှကျကို စားပှဲပျေါတငျရငျး ဒျေါခငျထားက ခနဲ့ပွောလေးပွောကာ ထှကျသှားသညျ။ ဒျေါခငျထား၏ ခနဲ့သံက သူ့အတှကျတော့ သိပျမဆနျးလှပါ။ သူ ၁၀ နှဈသားမှာ အမဆေုံးသှားပွီး အဖကေ ဒျေါခငျထားနှငျ့ နောကျအိမျထောငျပွုလိုကျတာမို့ ဒျေါခငျထားက သူ့အမဖွေဈလာခဲ့သညျ။ အစကတော့ ခဈြခငျနှဈလိုသညျ့ဟနျ ပွခဲ့ပမေဲ့ နောကျပိုငျးတှငျ သူ့ကိုနှိပျစကျလာသညျ။ အကွောငျးမရှိ အကွောငျးရှာ ရိုကျနှကျလာသညျ။ ဒါတှကေို အဖကေ သိလကျြနဲ့တောငျ ဘာမှမပွောဘဲ နှုတျဆိတျနခေဲ့လို့ သူအဖအေ့ပျေါ နာကညျြးခဲ့သညျ။ “အဖေ ဒီမိနျးမနဲ့ မကှာရငျ ကြှနျတျော အိမျပျေါက ဆငျးမယျ” လို့ ခပျရိုငျးရိုငျး နှုတျလနျထိုးတုနျးကလညျး အဖကေ သူ့ကို ခပျအေးအေးသာ ကွညျ့နခေဲ့သညျ။
သားတဈယောကျကို မစှနျ့လှတျနိုငျသောစိတျနှငျ့ ဒျေါခငျထားနှငျ့ ရသော သမီး ခငျမကေို အရိပျအမိုးအောကျက လှတျထှကျမသှားစခေငျြသောစိတျ လှနျဆှဲနရေသော ဖခငျတဈယောကျ၏ မတ်ေတာကို သူကိုယျတိုငျဖခငျဖွဈပွီး တျောတျောကွာမှ သိရှိခံစားခဲ့ရသညျ။
“အဖေ စာအုပျတှဖေတျခငျြရငျ ကြှနျတျောဝယျလာပေးမယျလေ…ဘာသာပွနျစာအုပျတှေ အသဈထှကျတယျ ကွိုကျမယျမလား”
အဖကေ ပွုံးကာ ခေါငျးညိတျစဉျ ဒျေါခငျထား၏ အသံက စူးခနဲ ဝငျလာသညျ။
“အမလေး ကိုလတျရယျ ငှကေုနျခံမနပေါနဲ့ မငျးအဖကေ ထိုငျတောငျမထိုငျနိုငျဘဲနဲ့ စာဖတျဖို့ဆိုဝေးသေး”
အဖကေ ဒျေါခငျထားအသံကို မကွားခငျြဟနျဖွငျ့ မကျြလုံးအသာမှိတျကာ ငွိမျနတေော့သညျ။ သူအဖလေ့ကျကို တငျးတငျးလေး ဖဈြညှဈလိုကျပွီး အဖကေို့နှုတျဆကျကာ ပွနျခဲ့တော့သညျ။
Related Article >>> အဖတေဈခု သမီးတဈခုပဲရှိသူသာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြမြား
“ဖဖေေ ဖဖေေ ဒီမှာ ဘိုးဘိုးကွီးနာမညျပါလာတယျ”
အလုပျမသှားခငျ ဘုရားကနျတော့နသေော သူ့ဆီသို့ သမီးငယျလေးက ကွေးမုံသတငျးစာနှငျ့အတူ အပွေးရောကျလာသညျ။ နောကျဆုံးနားက နာရေးသတငျးမှာ သူအဖနေ့ာမညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ “ဒျေါခငျထား၏ခငျပှနျး၊ မခငျမေ၏ ဖခငျ” တဲ့။ အဖရေဲ့ နောကျဆုံးခရီးမှာတောငျ သူက သားတဈယောကျနရောတှငျရှိမနခေဲ့ပါလေ။
အိမျတံခါးဝမှ လှမျးချေါသံကွောငျ့ သူထှကျကွညျ့လိုကျတော့ ခငျမဖွေဈနသေညျ။ သူ့ဆီအညိုရောငျ စာအိတျရှညျရှညျလေး ထိုးပေးရငျး “ဖဖေကေ ကိုလတျကို သိပျခဈြခဲ့ပါတယျ… ကိုလတျ ဖဖေကေို့ မနာကညျြးပါနဲ့တော့နျော” ဟုပွောကာ လှညျ့ထှကျသှားတော့သညျ။
အဖေ သားကိုသိပျခဈြပါတယျ။ သားက အဖရေဲ့ ထာဝရ သားတဈယောကျပါ။ အဖအေ့ပျေါ သားရဲ့ အမုနျးတှေ ကပြေေးပါ။
အဖေ့ စာကလေးက သိပျတိုပါသညျ။ ထိုစာလေးကို ဖတျရငျး သူမကျြရညျမြား ဒလဟောကလြာတော့သညျ။ စာရှကျနောကျတှငျ ခေါကျလကျြပါလာသော အဖပေိုငျသညျ့ အိမျနှငျ့ခွံကို သူ့ထံလှဲသညျ့စာခြုပျလေးက သူ့ကိုလှောငျပွောငျနသေလို။ စားပှဲပျေါတှငျ အထပျလိုကျရှိနသော ဘာသာပွနျစာအုပျအခြို့က သူ့ကို လှောငျပွောငျနသေလို။
ငယျစဉျကတညျးက သူအဖအေ့ပျေါအထငျလှဲခဲ့သညျ။ အရှဲ့တိုကျခဲ့သညျ။ ရိုငျးစိုငျးစှာ နှုတျလနျထိုးခဲ့ဖူးသညျ။ အသကျကွီးလာတော့ မခံခငျြစိတျကလေးကို အကွောငျးပွုကာ အဖနှေငျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ အဆကျအသှယျဖွတျကာနခေဲ့ဖူးသညျ။ အထငျလှဲကာ နှဈပေါငျးမြားစှာ အိမျပွနျမလာသော သားမိုကျအပျေါ မပကျြပွယျသော အဖမေ့တ်ေတာကို သူခံစားမိလိုကျ သညျ။ သူမကျြနှာကို လကျဝါးနှဈဖကျဖွငျ့အုပျကာ ရှိုကျကွီးတငငျ ငိုကွှေးရငျးက “အဖေ ဖွဈလရောဘဝတိုငျးမှာ ကိုယျ့မတ်ေတာကို အထငျလှဲစျောကားခံရခွငျးမှ ကငျးဝေးပါစေ” ဟုသာ…
ဆှေး (နှလုံးသား၏ အနကျရှိုငျးဆုံးနရောမှ)
Tags: Dad, Father, fiction, love, Pain, Son, Sorry, Stepmother
For Her Myanmar November 20, 2018